Ao amin’ny lisitra ianao dia mahita ny mombamomba ny olona avy any Alemaina, Aotrisy, any Soisa ary ireo firenena hafa ao Eoropa Andrefana. Rehetra ireo dia tena izy, ary izy ireo dia mitady ny ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana, izay mety hiafara amin’ny fifandraisana miaraka amin’ny fomba fijery ny fanambadiana izany. Toy izany koa rehefa manao, izy ireo dia tonga Inter namana ao amin’ny fanantenana ny hahita ny fanahy vady. Inter namana — mampiaraka toerana misahana manokana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Nandritra ny taona ny tantara efa nanampy vehivavy an’arivony mba hahita ny nofy mpiara-miasa sy ny mamorona ny fianakaviana sambatra. Ny mpikambana dia resy lahatra ny amin ‘ ny matihanina sy ny rafitra tsotra.
An-tapitrisany irery vahiny, anisan’izany ny Alemà, mitady ny fitiavana ny mpiara-miasa ao amin’ny atsinanana dia ho sambatra amin’ny hoavy. Inona no mahasarika ny vehivavy ny lehilahy alemana? Nahoana izy ireo manomboka mirona mampiaraka sy hahazo manambady any Alemaina? Tokony ho fantatrao, fa: Raha eo am-panaovana ny mampiaraka ao am-ponao dia hoe: ‘eny’ amin’ny famindram-po ny olona avy any Aotrisy, dia tsy mba ‘hampianarana’ azy ireo, ireo dia teraka miaraka amin ‘ ny fahalalam-pomba. Dia toy izany no, dia afaka soa aman-tsara ny hitaiza ny fianakaviana iray ary hankafy ny fahasambarana.
Ny hatsaran-tarehy tonga avy ny fomba ara-pahasalamana ny fiainana sy ny fitiavana ny fanatanjahan-tena. Toy ny maro hafa, vahiny, olona avy any Suisse dia mitady ny fitiavana eo amin’ny mampiaraka toerana. Ao amin’ny fikarohana ny mpiara-miasa manerana ny aterineto, dia azo atao ny omit ny mahazatra italiana olona. Satria Inter namana dia zavatra mampiaraka toerana, eto ianao mahita ny ankamaroany dia olona avy any Atsimo Tyrol, ny avaratry ny faritanin’i Italia. Sarotra ny mamaritra ny toetry ny Frantsay, tsy misy ny tena raiki-pohy ho azy ireo. Izy ireo dia mety ho tena be, amin’ny fomba tsara ny mazava ho azy. Espaina tany maro ny zom-pirenena, izay mahita ny tenany eo amin’ny fifandraisana amin’ny samy efa tahaka ny olona vahiny izy ireo. Raha ny marina, izany rehetra espaniola manana be dia be amin’ny mahazatra, jereo: dia raiki-tampisaka ao amintsika fa ny vehivavy rehetra te-hihaona amin’ny lehilahy ny azy nofy iray andro, na araka ny Platon dia hevi-diso momba ny Androgynies milaza, ireo Andriamanitra dia nanapa-kevitra noho izany, rehefa voaheloka ny olona ho mandrakizay fikarohana ho ny antsasany. Tamin’ny taona isika, dia vonona ny hihaona olona izay mbola tanora sy tsara tarehy. Tamin’ny taona isika, dia vonona ny hihaona olona izay tsara tarehy sy manan-karena. Tamin’ny taona isika, dia manomboka mieritreritra ny miezaka hahita ny mpiara-miasa any ivelany (koa izay manan-karena). Teo amin’ny faha-na isika mandinika ny soatoavina sy ny mahatakatra fa hanambady lehilahy manan-karena dia tsy foana tombony, satria ny ankamaroan’ny ny manan-karena ny olona dia tonga izy ireo, satria tsy tia ny fandaniana ny vola, indrindra ny momba ny vehivavy izay tia ny vola fa tsy ny maha-izy azy, ary tsy misy mahalala ny fomba ela ny vehivavy toy izany dia hijanona miaraka amin’ireo lehilahy. Tamin’ny taona ity ny fiainana traikefa milaza fa mitady ny lehilahy iray izay manana eo ho eo ny vola miditra, fa izay mahaliana sy manan-tsaina, izay afaka mahatakatra sy manohana antsika na inona na inona toe-draharaha, izay dia ho afaka ny tenanao sy izay ho tia sy hankasitraka tsy ny hery, fa koa ny fahalemeny. Ny taona takatsika fa isika dia mety malahelo ny fiaran-dalamby sy ny endriky ny tendrena ho mpiara-miasa intsony isa iray tsara (isika dia tsy misy intsony ny andriambavy na), ary ny mahazatra fifandraisana lasa laharam-pahamehana. Tamin’izany taona izany dia nofy ny fivoriana ny olona amin’ny marin-toerana ara-tsosialy toerana sy voalanjalanja toetra amam-panahy. Izahay maniry izay ny mpiara-miasa mety afaka manova zavatra eo amin’ny fiainana, afa-tsy ny habetsaky ny toerana malalaka eo amin’ny fitafiana, sy ho vonona hanao sorona ny zavatra noho ny amin’ny vehivavy izy dia handeha hanambady. Inona no manaraka? Tsy maintsy nandalo ny dimam-polo avy, fa mbola t very ny fanantenana ny hahita ny fitiavana, dia hihaona amin’ny lehilahy ny nofy. Mba lazao ny marina, amin’izao taona iraisam-pirenena mampiaraka dia tsy ho mora. Na izany aza, ny isan-andro ny isan’ny antokony ho amin’ny Aterineto sy ny solosaina ireo mpampiasa ho an’ny taona ny lehilahy mampitombo sy ny taona fisotroan-dronono ho zavatra ny olona dia mahazo akaiky ary efa misotro ronono ny Alemana no tena finday sy ny well-to-do (dia mandeha ny be dia be, manao fanatanjahan-tena tsidiho ny golf mazava ho azy fa na malaza trano fandraisam-bahiny). Noho izany, dia mbola mety manantena ny hihaona amin’ny lehilahy ny nofy ny alalan ‘ ny Fiarahana Alemaina asa fanompoana. Ny zava-dehibe dia ny tsara tarehy, ny faniriana sy ny fara-fahakeliny ny fahalalana fototra ny alemà.
Noho izany, aza mandany fotoana nisy fisalasalana
Ny fotoana mihazakazaka awfully fifadian-kanina sy tsy hisy hanome anao indray namoy ny fahafahana, ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po. Mivory ny olona, daty ny lehilahy, ny mpanadala sy ny raiki-pitia. Mandefa hafatra tokana olona avy amin’ny olona no vokatr’izany fa dia havaozina isan’andro. Miresaka amin’ny olona avy amin’ny firenena hafa sy ny kolontsaina no tena mahaliana sy mitondra zava-baovao eo amin’ny fiainanao. Hisoratra anarana ao amin’ny iraisam-pirenena ny fiarahana sy ny fanambadiana toerana, mameno kely manokana fanontaniana, mampakatra ny ny sary sy ho mavitrika izay rehetra tokony hanombohana maimaim-poana amin’ny aterineto ny fiarahana sy ny hihaona tandrefana ny olona avy any Alemaina, Soisa, Aotrisy sy ny firenena hafa. Dingana telo sy kely ny initiative — ny tsy be ny manana fahafahana mifankahita amin’ny olona ny nofy, ny Andriamatoa Marina, ao amin’ny hoavy tsy ho ela
← Malaza Mampiaraka toerana
Tsara Indrindra "Mpivady" Mampiaraka Toerana Safidy — (Fitsapana Maimaim-Poana) →